Umatshini wokutya we-pellet weentlanzi ezityayo
Ubungakanani bokugqibela bepellet:0.9~ 15mm
Isetyenziselwe:ukwenza ukutya kweentlanzi ,Ukutya kwekati ,ukutya kwenja ,ukutya kwesilwanyana
Ubume bokugqibela bepellet :ubume bebhola,ubume bethambo,imilo yentliziyo,ubume beenyawo
Iimpahla ezingekasilwa:amabele ,iimbotyi,uflawa wombona,inyama,ukutya kwamathambo ,iintlanzi zithetha, ioli yeentlanzi,njl
Ukufuma komswakama okusafuneka:15~ 25%
Zisoloko zineeprotheyini ezityebileyo zokutya kwiintlanzi , kodwa iprotein emnyama ekutyeni yentlanzi kunzima ukuyicola ngenxa yentlanzi. Ukuthintela ukwahlula izithako zokutya ngexesha lenkqubo yokuxuba, abantu basebenzisa umatshini wokutya wepellet weentlanzi ukwenza i-pellet yokutya kweentlanzi ,enokunyusa i-gelatinization kunye ne-digestibility yokutya,ukuze iintlanzi zibe lula ngakumbi ukufumana isondlo esidityaniswa ngokupheleleyo nokutya okuneentlanzi.Ukutya okuhanjiswa kukutya kubhekisa kwinkqubo yoxinzelelo, ukukhupha kunye nokubumba izithako zokutya kwimilo eyahlukeneyo yeepellets phantsi kweshushu, umswakama noxinzelelo.Ukutya okugcadiweyo okuveliswa ngumatshini wokuhambisa ukutya we-pellet yeyona nto iphambili ekutyeni uninzi lweentlanzi ngenxa yokutya okuninzi,I-digestibility ephezulu kunye nexesha elide lokudada,ukuhanjiswa ngokulula kunye nokugcina .
Umatshini wokuhambisa iintlanzi ezityibilikayo asetyenziswa kakhulu ekuveliseni iipellets zamanzi akwiqondo eliphakamileyo kwiintlobo ezininzi zezilwanyana zasemanzini njengeentlanzi., intlanzi yekati, tilapia,iimbadada, crab njl,inokusetyenziselwa ikati, inja nentaka njl. Izinto eziluhlaza zinokuba yingqolowa, umbona ,irayisi,ikhekhe lesoya ,ithambo lokutya ,isidlo seentlanzi ,ioli yeentlanzi kunye nokunye., Iipellets ezikhukhumeleyo zinokuntywila kumphezulu wamanzi ngaphandle kokuchithwa ngaphezulu 20 iiyure. Lo matshini wokutya we-pellet ulungele ukuveliswa kwee-pellets ezivela kwiingqolowa, iiprotheyini kunye neesolves zentengiso. Imveliso yokutya yeentlanzi ezivelisiweyo zenziwe ngokufanelekileyo, yiva incasa eyahlukileyo,bazizityebi ,ubukhulu obahlukileyo kunye nobume.
Umatshini wokutya we-injini yediesel yenjini uqhutywa yinjini yedizili kwaye usebenza kwesi siseko.Iyisombulula ingxaki yokuba umbane awulunganga, apho amandla esigaba esithathu engasetyenziswanga, kodwa amandla okusika asafuna idrive yombane.Uyilo loomatshini luyinto yesayensi kwaye isengqiqweni, nendawo encinci yomgangatho kunye nemveliso ephezulu,Ingxolo yokusebenza ephantsi, kunye nokusetyenziswa okuncinci kwamandla. Amanqanaba aphakamileyo e-pellet aphakamileyo kwaye umphezulu uqaqambile kwaye ucocekile, olulunge ngokugcina kunye nokuhamba. Esi sixhobo sisebenza ngokulula kunye nokugcinwa .Ubungakanani bembumba bunokuba ngu-0.9-15mm, enokuvelisa ukutya okuphezulu kwepellet ,nto leyo egudileyo, iyunifomu kunye nokubengezela.
Iimpawu zomatshini wokupholisa ngepellet
1.Kukho ubungakanani obahlukeneyo beemowudi onokuthi ukhethe kuzo ngokobungakanani bepellet ukuba ubungakanani be-pellet bunokuba ngu-0.9 ~ 15mm.Small size fish pellet can beatsele digest and absorption, ubunyani bokutsalwa kokutya okufumaneka emanzini kufuneka kube kuncinci kunokutya kwenkukhu.
2.Imveliso ye-pellet evelisiweyo enomda we compact,ukuhlangana okuphezulu kunye nokuxhathisa kwamanzi. I-pellet ekhutshweyo iyakwazi ukuntywila emanzini ngaphezulu 20 iiyure.
3.Isakhiwo esilula, isetyenziswa ngokubanzi, indawo encinci yomgangatho.umsebenzisi unokusebenzisa izixhobo zomgubo owomileyo ukwenza iithayile zokwenza iintlanzi ngaphandle kokongeza amanzi kumatshini wokuhambisa iintlanzi. Ukutyisa i-pellet eyomileyo kukulungele ukugcina.
4.Lo matshini wokutya we-pellet wentlanzi ukwasebenza ukwenza ukutya kwepellet ngenja ,ikati,isilwanyana sasekhaya ,intaka kunye njl.nokuvelisa ukutya okuphezulu kweprotein kwezilwanyana, kwaye kulula ukuyidaya. Ubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu lunokubulala i-salmonellosis kunye nosulelo lwebhakteria.
Ukusebenza Umgaqo womatshini wokudambisa we-tilapia
Umsebenzisi ukondla izinto eziluhlaza kwi-hopper yokutyisa,umngxunya wokutya uya kondla izixhobo zokwenza amanye amalungu., Ubushushu obuphezulu phakathi kwesikali kunye neplate yokufudumeza ukuze kukhuphe isitashi sezinto, Iprotheyini iyavaleka. Emva koko ukutya kweentlanzi kukhutshwa kwimingxunya yokubumba. Iipellets zokutya kweentlanzi zikhutshwa kumatshini wokuhambisa iintlanzi. Umsebenzisi unokuhlenga-hlengisa i-angle yokusika ukuze atshintshe ubude be-pellet yokutya.
Iiparamitha zobugcisa kumatshini wokudambisa we-tilapia
(kg / h) Amandla aphambili
Ukusebenza kwevidiyo yomatshini wokudada wepellet weentlanzi